mardi, 02 novembre 2021 18:29
Morondava : Mampiantrano fihaonambe nasionalin'ny mpitsabo mpanampy
Tanterahina aty Morondava renivohitry ny Faritra Menabe, manomboka androany 02 novambra ny fihaonambe nasionalin'ny mpitsabo mpanampy eto Madagasikara. Ao amin'ny Salle d'œuvre Namahora no atao ny fihaonana, eo ambany fitarihan'ny ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena, ary ny Ministeran'ny rano. Nisy ny diabe natao namakivaky ny tanàna nentina nanamarihana izany talohan'ny fanokafana.
Olona miisa dimy no voasaringotra amina halatr’omby, ka anisan’izy ny delegem-panjakana sy ny Sefo Fokontany ao Ampanefena Vohémar. Niaiky ireto roa farany fa voafitak'ireo mpangalatra. Raha iverenana ny tantara, dia niainga tamina antso tamin'olona tsara sitrapo voarain’ny Zandary ao amin’ny Poste Avancé Anjangoveratra ny marainan’ny 26 oktobra 2021, fa misy olona mitondra omby mampiahiahy mandalo eo anelanelan'ny lalana Ambodisambalahy sy Ambavala, ao anatin'ny Kaominina ambanivohitra Anjangoveratra Distrikan’i Sambava, amin'ny lalam-pirenena faha 5A, mampitohy ny Distrikan’i Vohémar sy Sambava. Nidina haingana tamin'io toerana io ny Zandary efa-dahy, ka tratra tao ny omby vositra miisa telo. Roalahy no nandroaka an'ireo omby ireo. Nilaza ireo fa manatitra ny omby hatrany Sambava fotsiny izy roalahy, fa mandeha taxi-brousse avy any Ampanefena ny olona tena mahalala ny omby, ary any aminy daholo ny taratasy rehetra. Nataon’ny Zandary ny velam-pandrika dia voasambotra ny androtr’io ihany, tao anaty taxi-brousse ilay olona voalaza fa mahafantatra ny omby.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ambohimanabe-Andraikiba amin’ny lalam-pirenena faha-34 ny harivan'ny alahady 31 Oktobra 2021. Fiara mpitatitra an'ny Kaoperativa Kofibe no nifandona tamin'ny lehilahy iray nitondra biskileta, nidina ho any Antsirabe, ary nifatratra tamin'ilay Sprinter. Raha ny fahitana ny loza dia mafy ny fifandonana satria dia nandriaka ny rà, ary potika tanteraka, na ilay biskileta na ilay fiara, ary voalaza fa tsy tonga teny amin'ny hopitaly akory ilay lehilahy dia nindaosin'ny fahafatesana. Raha ny fanazavana nomen'ny mponina moa dia toa avy nanao baolina tany andrefandrefana tany ilay niharan-doza io, ka tsy fantatra na noho ny fitarafan'ny jiron'ny fiara na inona no nahatonga izao loza izao. (Jereo Sary Tohiny)
Nitrangana haintrano tao Analakininina Hopitalibe parcelle 12_21-22 Toamasina ny alakamisy 28 oktobra 2021. Afo tsy voafehy niainga tao an-dakozian’ny tokantrano iray no niitatra, tokony ho tamin’ny 11ora sy sasany. Nifarimbona tamin'ny famonoana ny afo ny mpamonjy voina an’ny Kaominina Toamasina sy ny Seranan-tsambo (SPAT) ary ireo miaramila ao amin'ny ZDS Pangalana, nampian'ireo fokonolona manodidina. Naharitra ora iray teo vao voafehy ary maty tanteraka ny afo. Trano 15 no may, tsy nisy aina nafoy fa manodidina ny 90 atreto ireo olona traboina vokatry ny fahamaizana. Nametraka ny vahaolana vonjimaika hanampiana ireo traboina ny olom-boafidy sy ny tompon'andraikitra miaramila ao an-toerana. (Jereo Sary Tohiny)
Nidina ifotony tany amin’ireo Kaominina isany anjakan’ny tsy fandriampahalemana noho ny asan-dahalo ny iraka notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta Ntsay Christian, nahitana ireo minisitra misahana ny fandriampahalemana ambanivolo, dia ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ny jeneraly Gelle Serge. Teo koa ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, Ramatoa Razanamahasoa Christine, solombavambahoaka voafidy tany Ambatofinandrahana, faritra Amoron'i Mania, niaraka tamin'ny Atoa Imbiky Herilaza, Mpitahiry ny tombokasem-panjakana sady minisitry ny Fitsarana, ary ny minisitry ny mponina. Nalehan’ny delegasiona tao Mangataboahangy, Kaominina ambanivohitra ao anatin’ny Distrikan’Ambatofinandrahana. Niazo ny vavahadin'ny Faritra Menabe, Kaominina ambonivohitra Miandrivazo. Nito-didoha tany amin'ny kaominina Betsipolitra, Distrika Miandrivazo, ary koa tao Mahabo, Faritra Menabe ho fametrahana sy famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
Tohin'ny fihaonana sy dinika nataon'i Solombavam-bahoaka voafidy tao Ambovombe, sady kestora voalohany ao amin'ny Antenimieram-pirenena, Jean Michel Henry sy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, ary ny fiaraha-miasa tamin'ny Minisiteran'ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidioavana, dia ho tanterahina ny fitarihan-drano amin'ny alalan'ny fantsona lehibe hamatsiana rano fisotro madio ho an'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy. Efa manatanteraka ny tolo-bidy momba ny pipeline Efaho ny eo anivon'ny ministeran'ny rano tarihan'ny minisitra Ladislas Adrien Rakotondrazaka. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 27 octobre 2021 11:25
Volobe – Toamasina : Ny Lycée efa kitoatoa, ny mpampianatra koa mbola tsy manana mari-pahaizana
Fampanantenana nataona olom-boafidy no nivadika ho baiko fa tsy maintsy sokafana ny Lycée ao Volobe, ZAP Ambodilazana Fari-piadidiam-pampianarana Toamasina Il. Koa satria an-tery ka dia samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny isan’ambaratonga. Tsy misy trano ho an’ny Lycée fa naka efitra iray ao amin'ny CEG ao an-toerana ho fianarana. Mpampianatra ao amin’ny CEG, tsy manana mari-pahaizana farafaharatsiny « Licence » takiana ho an’ny lycée, no ampiandraiketina ny fampianarana. « Tsy mijery fahaizan’ny zaza izany fa mila ilay izy misokatra ny lycée dia izay, izay tsy haha afa-baraka ny lehibentsika no atao », hoy ny toromarika.
Nodimandry ny talata 7 jolay 2020, vanimpotoana nampamaivay ny valanaretina Covid-19, i Rakotomalala Lucien dit «Le Fomela», solombavambahoaka IRD voafidy tao amin’ny Distrika Morombe, Faritra Atsimo Andrefana. Voalaza fa nanana areti-mitaiza sohika ity parlemantera ity. Talohan’ny nifaranan’ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny Antenimieram-pirenena izy no efa tsy salama, ary tsy tonga niatrika fivoriana intsony. Tao amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana no nitsaboana azy, saingy tsy tana ny ainy. Nampahafantatra tamin’ny alalan’ny tambazotra Facebook ny fianakaviany fa ho tanterahina ny zoma 22 oktobra 2021 eny Ambohijanaka Imerimanjaka – Antananarivo Atsimondrano ny fitondrana ny taolambalony hiazo ny tanindrazany any Befandriana Sud.
Ravan’ny Polisim-pirenena ny tambazotran-jiolahy, mpangalatra omby sy vaky trano nampitondra faisana ny mponina tao Antsiranana sy ny manodidina. Folo mianadahy no voasambotra ny 23 sy 24 oktobra teo, lehilahy ny valo ary vehivavy ny roa. Misy amin'izy ireto ny mpivarotra sy mpamily ary ny mpangalatra. Omby efa manodidina ny zato no nangalarin’izy ireo, ka anisan'izany ny ombin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny reniny tao Sakaramy Antsiranana II, very tamin'ny volana Septambra 2020.
Haverina hihodina ny milina rehetra. Manamboatra ireo tokony hamboarina ny teknisianina. Ho soloina ny tokony ho soloina rehetra, anisan’izany ireo andrin-jiro tranainy. Vahaolana avy hatrany no naroson’ny Governoran’ny Faritra Amoron’i Mania, Mamiarisoa Radaloson raha tonga nijery ifotony ny olana tsy nahafahan’ny foibe famokarana herinaratra azo avy amin’ny rano ao Antetezambato amin’ny lalam-pirenena faha-7, Kaominina Tsarasaotra, Distrika Ambositra, ka nahatapaka efa naharitra, ny jiro tamin’ireo tanàna manodidina. Fokontany miisa fito manodidina no misitraka herinaratra vokarin’ity toby famokarana kely ao Antetezambato ity. Miara-miasa akaiky amin'izao famerenana amin’ny laoniny ny famokarana herinaratra ao Antetezambato izao ny Solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny Distrika Ambositra sy ny Ben'ny Tanànan'ny Kaominina Tsarasaotra. (Jereo Sary Tohiny)